အိပ်စက်ခြင်းတစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းရေးဆိုတာဘာလဲ? Sleep hygiene isahabitual activity that helps us fall asleep and maintain healthy sleep. ညံ့ဖျင်းသောတစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှုသည်အိပ်စက်ခြင်းကိုတားဆီးနိုင်သည်. ကောင်းမွန်သောအိပ်စက်ခြင်းအလေ့အထလူတိုင်းသည်ကောင်းမွန်သောအိပ်ရေးအလေ့အထရှိလိုကြသည်, ဒါပေမယ့်နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အတူ, လူတွေရဲ့အိပ်စက်ခြင်းအရည်အသွေးကကျဆင်းနေတယ်. ဒီတော့, အိပ်စက်ခြင်းအရည်အသွေးကိုအကျိုးသက်ရောက်စေသောအချက်များကားအဘယ်နည်း? What…